Ajay Devgn “Aniga iyo Kajol lacag naguma yaro haddana guri aan ka kireesano xaafada Juhu (Mumbai) ayaan weesanahay!” – Filimside.net
Ajay Devgn “Aniga iyo Kajol lacag naguma yaro haddana guri aan ka kireesano xaafada Juhu (Mumbai) ayaan weesanahay!”
Superstar Ajay Devgn iyo xaaskiisa Kajol waa lamanaane awood badan fanka Hindiyana magac ku leh waxayna is guursadeen sanadii 1999 sidoo kalena dhanka fanka weli saameyn ayay ku leeyihiin waana qoys dhameestiran madaama wiil iyo gabbar u joogaan.
Haddaba Devgn ayaa todobaadyadii ugu dambeesay ku mashquulsanaa guri raadis asigoo rabo xaafada Juhu ee dadka dabaqada sare Hindiga ah iyo jilaayaasha Bollywood-ka hantida heestaan ku nool ka kireesto sidoo kalena xaaskiisa Kajol ayaa garab ka siineyso arinkaan balse weli guri anfaco qoyskan caanka ah Juhi kama helin.
Ajay Devgn iyo Kajol hanti ma guurto ah ama guri weyn ayay ku leeyihiin xaafada Juhu oo Mumbai ka tirsan balse waxay rabaan in gurigooda dib u dayactiraan sidoo kalena wax ka badalaan qolalkiisa madaama gabadhooda Nysa inan weyn noqotay waana 15-jir sidoo kalena wiilkooda Yog isagana madaxa sare usoo qaadayo oo uu 8-jir yahay marka aqalka waa in wax laga badalaa.
Sidaa darteed Ajay wuxuu yiri “Guriga aan Juhu ku leenahay qoys ahaan waxaan rabnaa inaan dib u casriyeeno madaama caruurteena dad waa weyn noqdeen balse aniga iyo Kajol lacag naguma yaro haddana guri aan ka kireesano xaafada Juhu (Mumbai) ayaan weesanahay waxaana ugu wacan in dadkii dabaqada sare halkaan isugu imaadeen sidoo kalena guryaha nala tusay na anfaci waayeen.”
Ajay ayaa sheegay marka ay guri ay u guuraan helaan kadib dayactir lagu bilaabi doono aqalkooda sidoo kalena qoyskiisa ma rabaan xaafad ama degmo kale oo Mumbai ka tirsan inay u guuraan madaama Juhu ay aad u jecel yihiin.
Juhu waa degmo ama deegaan ah oo xeeb leh kuna taalo duleedka Mumbai sidoo kalena ah meel loo dalxiis tago oo dadka dabaqada sare degan yihiin waxaana xusid mudan in atirishada caanka ah Hema Malini ahayd qofkii ugu horeeyay ee Bollywood-ka ka tirsan xaafadan soo sahmiso ama guri ka iibsato sanadii 1972 haatana waa magaalada ugu qaalisan oo ay degan yihiin qaar ka mid ah jilaayaasha Bollywood-ka ugu caansan.